Feather သင်တုန်း Blades | Feather Razor Styling Blades Australia - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ပင်မစာမျက်နှာ / Feather ဂျပန်သင်တုန်းဓါးသွား / 1 ၏စာမျက်နှာ 1
အကြောင်းပို Read Feather ဂျပန်သင်တုန်းဓါးသွား
အဆိုပါ Feather သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ရှိဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၊
သင်ဟာ Nape Razor၊ Shaving Plier Razor ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ SS ပုံစံဒီဇိုင်းနှင့် texturizing ဖြစ်စေ SS Club အနုပညာရှင်သင်တုန်းကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်အရည်အသွေးမြင့်ဂျပန်ကိုရနိုင်သည် Feather အွန်လိုင်းဓါးသွား!
အကောင်းဆုံး Feather PB-20 အပါအ ၀ င်၊ Feather Standard Blades၊ Texturizing နှင့် Thinning ဓါးများနှင့်ကျော်ကြားသော double-edge သင်တုန်းဓါးများ။
Feather သင်တုန်းအစားထိုးသင်တုန်း Blades
Feather Shavette သင်တုန်းဓါးသွား
ဘာဘာ Razor Blades
Double Edge မင်္ဂလာပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံစုဆောင်းမှုကိုကြည့်ပါ Feather ဤနေရာတွင်သင်တုန်းအမှတ်တံဆိပ်!
ဘာဖြစ်တာလဲ Feather ဒါကြောင့်အထူးသင်တုန်းဓါးသွား?
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ညှပ်သမားများနှင့်ဆံပင်အသုံးပြုသည် Feather အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိ၊ အလွန်ချွန်ထက်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်ကြောင့်သင်တုန်းဓါးသွားများသည်။
၁ သို့မဟုတ် ၂ အသုံးပြုပြီးနောက်တုံးသွားသောတရုတ်သို့မဟုတ်ပါကစ္စတန်တို့တွင်ပြုလုပ်သောစျေးနှုန်းချိုသာသောဓါးသွားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Feather သင်တုန်းသည်နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးဆတိုးစေသည်။
သော်လည်း Feather သင်အသုံးပြုသောပုံမှန်ရွေးချယ်မှုများထက်သင်တုန်းဓါးများသည် ပို၍ စျေးကြီးနိုင်သည်။ သူတို့သည်ပိုမိုရှည်လျားသောပြတ်လပ်မှုများကြောင့်ရရှိနိုင်သောစျေးအသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
သင် ၀ ယ်လို၊ မ ၀ ယ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှာဖွေနေပါက Feather သောင်းနှင့်ချီသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်နှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၏ရွေးချယ်မှုသည်သြစတြေးလျမှသင်တုန်းဖြစ်သည်။
ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ Feather နောက်ဆုံးသင်တုန်းဓါးသွား?
အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Feather မကြာခဏသင်တုန်းများသည်သူတို့၏သက်တမ်းပိုရှည်သောကြောင့်စျေးသက်သက်သာသာရွေးချယ်နိုင်သည်။
အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစျေးနှုန်းချိုသာသောသင်တုန်းများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတုံးဖြစ်လာသည်။ ခြားနားချက်တစ်ခုသည်တစ်နေ့လျှင်စျေးပေါသောသင်တုန်းတစ်စီးနှင့်သွားခြင်းနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည် Feather တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်တစ်လ၌တည်၏။
အခြေခံသင်္ချာကပိုစျေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြနိုင်တယ် Feather သင့်ကိုသင်ပိုမိုချွေတာသည်
Feather2မှ5အသုံးပြုမှုအကြားကြာရှည်သင်တုန်းဓါးသွား။ ဤအချိန်သည်ဆံပင်မည်မျှထူသည်၊ ကြမ်းတမ်းသည်၊ သင်မည်မျှအသုံးပြုသည်စသည်တို့ပေါ်မူတည်သည်။
Feather သင်တုန်းဓားနှင့်အတူဆံပင်နှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သင်၏မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ကိုသင်တုန်းဓားအတွက်သင်တုန်းဓါးဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာသားအရောင်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပါးလွှာသောဓါးဖြင့်လည်းကောင်းအလွယ်တကူအစားထိုးနိုင်သည်။